नयाँ बर्षमा संगीतमय बन्छ तुलसीपुर ( अन्तर्वार्ता ) - Tulsipur Online
नयाँ बर्षमा संगीतमय बन्छ तुलसीपुर ( अन्तर्वार्ता )
Posted by Admin | ३० चैत्र २०७५, शनिबार १२:४५ |
आज शनिवार । तुलसीपुरमा रहेको द पार्क क्याफे मा २०७५ साललाई विदाई गर्दै नयाँ वर्ष २०७६ सालको स्वागतका लागि वृहत सांगितीक साझ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । बेलुका ७ बजेदेखि रातको ठिक १२ बजे सम्म संचालन हुने कार्यक्रममा थुप्रै कलाकारहरुले आफ्नो प्रस्तुती राखि तुलसीपुरवासीलाई मनोरन्जन प्रदान गर्ने आयोजकले विश्वास व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा चर्चित गायिका विन्दु परीयार,गायकहरु अंकित न्यौपाने,सन्दिप न्यौपाने लगायतका कलाकारहरुको वेजोड प्रस्तुती रहने छ ।
साथै कार्यक्रममा तुलसीपुरकै चर्चित व्यान्ड सल्यास व्यान्ड लगायत स्थानिय कलाकारहरुको पनि प्रस्तुती रहने छ । विशेषगरी नयाँ वर्ष मनाउनका लागि तुलसीपुरवासीहरु आफ्नो ठाउ छाडेर अन्यत्रै गएर मनोरन्जन लिने भएकाले आफ्नै ठाउमा पनि नयाँ वर्षलाई गज्जवले स्वागत गर्न सकिने भएकाले तुलसीपुरवासीका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको क्याफेका संचालक राजेन्द्र महतराले जानकारी दिए । चलचित्र पत्रकार संघ,दाङ शाखाको सहकार्यमा कार्यक्रम राखिएको हो । सांगितीक साझको वारेमा केन्द्रित रहेर हामिले क्याफेका संचालक राजेन्द्र महतरासंग ध्रुबराज न्यौपाने ( डिआरएन)ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । सम्पादक
 कार्यक्रमको तयारी के छ ?
आज बेलुका सात बजेदेखि तुलसीपुरको पार्क क्याफेमा वृहत सांगितिक कार्यक्रम हुदैछ । सबै कलाकारहरु तुलसीपुर आईसक्नु भएको छ । सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । छुटपुट सानातिना काममा व्यस्त छौ ।
 किन कार्यक्रम राख्नुभएको ?
विशेष गरी नयाँ वर्षको अवसरमा तुलसीपुरमा खासै कार्यक्रमको आयोजना हुदैनथ्यो । तुलसीपुरवासीहरु नयाँ वर्ष आउदा सधै अन्य ठाउमा गएर मनोरन्जन गुर्नपर्ने बाध्यता थियो । हामिले तुलसीपुरवासीहरुको ईज्जतका लागि कार्यक्रम राख्नु पर्छ भनेर सोच बनायौ । त्यसपश्चात चलचित्र पत्रकार संघ दाङ शाखाका अध्यक्ष ध्रुव राज न्यौपाने (डि.आर.एन) लगायतको टिम संग सल्लाह गर्यौ र उहाँहरुको सहकार्यमा कार्यक्रम राख्न तयार भयौ । कार्यक्रममा आयोजक हामि भएतापनि यसमा चलचित्र पत्रकार संघ दाङ शाखाले उल्लेखनिय भूमिका निर्वाह गर्दै पूर्ण रुपमा हामिसंग सहकार्यमा जुट्नु भएको छ । तसर्थ तुुलसीपुरमा पनि यस्ता खालका मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम राखि तुलसीपुरवासीहरुको ईज्जत जोगाउनका लागि कार्यक्रम राखिएको हो । अव तुलसीपुरवासीहरु आफ्नो स्थान छाडि अन्य ठाउमा गएर नयाँ वर्ष मनाउनुपर्ने छैन । आफ्नै ठाउमा पुरा मनोरन्जन लिन सक्नुहुनेछ ।
 रातिको समयमा कार्यक्रम राख्नुभएको छ , सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउनुभएको छ ?
पक्कै पनि नयाँ वर्षको कार्यक्रम हो । हामिले राति १२ बजेसम्म कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा व्यवस्था राम्रो संग मिलाएका छौ । ईलाका,जिल्ला प्रहरी संग सहकार्य गरेका छौ । कार्यक्रममा विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सहभागीता हुने छ । त्यसैले कार्यक्रमको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
 कार्यक्रमको समयतालिका कस्तो बनाउनुभएको छ ?
पहिला हामिले औपचारीक कार्यक्रम संचालन गर्छौ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्छौ । केहि विशिष्ठ व्यक्तिहरुको मन्तव्य राख्छौ । औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि सांस्कृतिक कार्यक्रमको सुरुवात हुन्छ । जसमा चर्चित गायिका विन्दु परीयार,गायक अंकित न्यौपाने,सन्दिप न्यौपाने लगायतले आफ्नो प्रस्तुती राख्नुहुने छ । साथै सल्यास व्याण्ड,स्थानिय कलाकारहरुको पनि बेजोड प्रस्तुती प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
 प्राय ः दाङकै कलाकारलाई वोलाउनु भएको छ किन ?
हजुर पक्कै पनि हामिले उक्त कार्यक्रममा दाङकै कलाकारलाई वोलाएका छौ । हामिले अन्य कलाकारलाई पनि वोलाउने कि भन्ने सोच बनाएका थियौ । पछि चलचित्र पत्रकार संघ दाङ शाखाका साथहरु संग सल्लाह गर्यौ र उहाँहरुले दाङकै कलाकारहरुलाई प्राथमिता दिनुपर्ने सल्लाह दिनुभयो र उहाँहरुकै सल्लाह बमोजिम हामिहरुले सबै दाङ जिल्लाकै कलाकारहरुलाई समेटेयौ । अर्को कुरा दाङ जिल्ला पनि अव कला क्षेत्रमा अव्वल भईसकेको छ । हामिले ल्याउन लागेको कलाकारहरुले देशव्यापी रुपमा आफ्नो नाम कमाईसक्नु भएको छ । उहाँहरुले गाएका गितहरु अहिले बजारमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको छन् । त्यसैले पनि हामिले सुरुमा दाङलाई नै प्राथमिकता दियौ । हामिले दाङमा कार्यक्रम गर्ने तर हामिले नै हाम्रा जिल्लाका कलाकारलाई अवसर नदिए कसले दिन्छ भनेर हामिले यो सुनौलो कुराको थालनि पनि गरेका छौ ।
 अन्तमा के भन्नुहुन्छ ?
तुलसीपुरमा नयाँ वर्षको अवसर पारी कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौ । सबैको साथ र सहयोगले नै आगामी दिनमा यस्ता खालका कार्यक्रम पुन आयोजन गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रम हामि आयोजकको मात्र नभएर समग्र हामि सबै तुलसीपुरवासीको हो । कार्यक्रममा उपस्थितीको लागि सबैलाई अनुरोध गर्दछु । अन्तमा केहि कुरा राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई र यहाँ लोकप्रिय मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहान्छु साथै चलचित्र पत्रकार संघ दाङ शाखालाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहान्छु ।
Previousबिष्णु चौधरी रिहा : ‘आफुलाई फसाउन खोज्नेहरु असफल भए’
Nextतुलसीपुर जेसिजको कार्यक्रम बैशाख १ गते मात्रै